Fadhi ku dirirka iyo Faallada Shacabka Qeybtii 3-aad - By Cabdiraxiin Hilowle Galayr | KEYDMEDIA ONLINE
Fadhi ku dirirka iyo Faallada Shacabka Qeybtii 3-aad - By Cabdiraxiin Hilowle Galayr
Cabdiraxiin Hilowle Galayr - Waa sheekadeenii taxanaha ahayd ee araahda Dadweynaha iyo kala feker duwanaanshaha, iyadoo aan sidii caadada ahayd ku soo qaadan doonno, asxaabtii horre iyo Rag cusub ee ka faalloon jirey arrimaha iyo wacyiga dalku hadba meesha uu marayo, bal maantana waa tane ka bogasho wacan.
Dharaar weliba sheeggeed, dhacdo weliba hadalkeed, Arrin laga dhursugayaa, Ismaan dhaafka keentee.
Xaaji Ducaale: War miyaan laguu sheeginba? Meeshii waa lagu kala tegay, oo xitaa Booliis baa yimid, meeshii muran xooggan baa ka dhacay oo ragbaa isku daqrey, waxaana laysku maandhaafey Dowladda cusub iyo qorshaha Golaha Wasiirrada, Duqa Magaalada Muqdisho, iyo Arrimaha Jubbooyinka. Xaaladdu farahey ka baxdey ee halkii yarayd eeMasaajidka u dhawayd Majliskii Casariyahaan fadhiyaa aniga iyo Xaaji Duulduul oo arrinta ku soo baxaye noogu kaalay.
Xaaji Duulduul: Bismilaahi Raxmaani Raxiim, war niyaw Wallaahay waxbaa dhacay, kkk oo hadda ma waxaad i leedahayXaaji Dirir wuxuu ka xanaaqayaa Jubbooyinka waa laysla degaa? Waxaan beri anigoo socdaala tegay Magaalada Burco, Masaajid ayaan ku tukadey markaasaan arkay nin waalan oo ciyaalka eryanaya waxaan ku idhi: Odayaal meesha joogay maad ka celisaan? Waxay yidhaahdeen, waxba maqli maayo oo waa noocaasoo, wuxuu ka xanaaqaa waa la dhimanayaa, ninkii oo noo dhaw ayaan eraygii markaan maqlay anigoon is ogayn idhi maxaad tidhi? Waa la dhimanayaa ayuu ka xanaaqaayaa, dee intuu maqlay ayuu dhagaxii igu soo maguujey oo halkaa Salxanta igaga dhuftay oo dhiiggu butaacay, dee iminka waa halis, haddii Xaaji Dirir sidaa ku sii wado waa waalanayaa ee ma laga soo daayey Booliiska mise weli waa xidhan yahay?
Xaaji Duul duul: Wcs, waa la fiican yahay dhibna ma jiro intaad ogtahay uunbaa dhacday, balse, waxaa la waayey ninkiiXaaji Dirir ku odhan lahaa waad geftey, waadna dagaallantay , nimankii saaxiibbadaana qaladbaad ka gashay, kaftankuna inuu heerkaas gaadho maaha, Xaaji Dirir waa in xaal laga qaadaa oo loo sheegaa in Jubbooyinka la wada degan yahay, dalka oo dhanna la wada deganyahay, balse, yaa u sheegayaa meesha taal? Illeen Xaaji Dirir waa soo jeestaye!
Waxaa laysku raacay in loo tago Xaaji dirir, sheekaduna waa madlantahay oo weli guux baa jira waxii lagala kulmi doonoXaaji Dirir oo isaguna cid dirsaday oo Odayaashii markey la hadleen odayaal kale oo xigaalkiisa ah guriga ku diyaarsaday la soco qaybta danbe .
Cabdiraxiin Hilowle Galayr - Galayr1977@hotmail.com